I-NoDa 2 BR/1 BA apt Ikahle Kakhulu Ngezindlu Zebhizinisi 2 - I-Airbnb
I-NoDa 2 BR/1 BA apt Ikahle Kakhulu Ngezindlu Zebhizinisi 2
Lesi sakhiwo esinakekelwa kahle sitholakala esifundeni saseNoDa Arts, kungakapheli imizuzu eyi-15 ukuya ezindaweni zokudlela kanye nokukhanya kwasebusuku kanye nojantshi wesitimela oya edolobheni laseCharlotte. Isakhiwo siqukethe amayunithi angu-4 kuma-Duplexes angu-2 ahlukene. Iyunithi ngayinye inamamitha-skwele angama-950 futhi ngayinye inefenisha enhle futhi isanda kulungiswa ngemishini emisha. Phakathi kwamabhilidi angu-2 kunevulandi okwabelwana ngakho nge-Gas BBQ kanye nendawo yokuhlala. Indawo yokupaka yangasese eyanele ngemuva kwe-duplex engemuva.
** Woza uzosebenza ukude ukusuka lapha. Inala yesikhala sedeski kanye nesivinini se-inthanethi esisheshayo. Izintengo zehliswe ngo-15% ngokuhlala okukhulu kunenyanga engu-1. Cela ezinye izaphulelo zokuhlala izinsuku ezingaphezu kwezingama-90. Ngaphezu kwalokho, ukuhlala izinsuku ezingaphezu kwezingu-90 akukhokhi Izintela Zokuhlala Edolobheni.
Lena indawo eyiyunithi engu-4 ehlanganisa ama-duplex ama-2. I-duplex yangaphambili inamagumbi amabili okulala aphansi ayi-2 / 1 Bath units. I-duplex yangemuva ineyunithi eyodwa yokulala engu-2 / 1 yokugezela phansi kanye neyunithi eyodwa yokulala engu-2 / 2 yokugezela esitezi sesibili. Iyunithi ngayinye inefenisha efanayo futhi inakekelwa. Zonke ziyatholakala ukuze ziqashwe.
Wonke amayunithi asanda kulungiswa ngamafasitela anamafasitela aphindwe kabili, amapulangwe abanzi aseScandinavia phansi, isimo somoya kanye nokufudumeza, izinto ezintsha zasekhishini, ezihlanganisa iwasha / isomisi, i-microwave, nomshini wokuwasha izitsha. Amakamelo okulala abekwe kahle, ngalinye linombhede olingana nendlovukazi nendawo enkulu yekhabethe. Indlu yokugezela eyodwa egcwele yabelwana kalula noma thatha iyunithi enkulu ukuze ube negumbi lokugezela elengeziwe. Igumbi lokuhlala elinethezekile line-TV ne-inthanethi esheshayo (isivinini sokulanda esingu-1000 Mbps) kanye ne-ROKU yezidingo zakho zokusefa.
Umnyango ophuma ekhishini ngalinye ukuholela egcekeni okwabelwana ngalo lapho othola khona igrill ye-BBQ yegesi ehlanganyelwe kanye nezihlalo zepatio yangaphandle. Ngaphambili kunompheme ombozwe kahle obheke utshani obuluhlaza kanye nezihlahlana ezilungiswe kahle. Inqwaba yezindawo zokupaka zangasese ezingaphandle komgwaqo ngemuva kwendawo.
Indawo yokuhlala ethule, kepha iseduze nenkaba yeNoDa ne-Uptown Charlotte
** Hamba uye ku-Light Rail ngemizuzu eyi-10; Isitimela siya e-Uptown Charlotte ngemizuzu eyi-15 noma siye e-NASCAR Hall of Fame ngemizuzu engama-20 kuphela.
** Hamba uye ezindaweni zokudlela ze-NoDa kanye nokuphila kwasebusuku ngemizuzu eyi-15. Noma sebenzisa elinye lamabhayisikili ethu angu-4 kanye nebhayisikili emizuzwini embalwa nje.
** Ilungele Izindlu Zebhizinisi, iholide elifushane, noma ukuhlala isikhathi eside